AMISOM oo la siiyey agab ciidan oo asaasi ah & weerar culus oo la qorshaynayo + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka AMISOM oo la siiyey agab ciidan oo asaasi ah & weerar culus...
AMISOM oo la siiyey agab ciidan oo asaasi ah & weerar culus oo la qorshaynayo + Sawirro
(Baydhabo) 29 Abriil 2020 – Taliyaha Howlgalka AMISOM, Sarreeye Gaas Tigabu Yilma, ayaa sheegay inay korodhay cududda ay ciidamadoodu hadda u leeyihiin inay fuliyaan howlgallo millateri kaddib markii la siiyey agab ciidan oo cusub.
Waxaa agabka ciidan ee AMISOM la siiyey ka mid ah gawaarida dusha ka furan ee fudud, abraarrada taangiyada xambaara, wiishleyaal iyo gaadiidka waawayn ee ciidamada qaada.
Taliyaha ayaa ka hadlayey Baydhabo halkaasoo uu ciidamada ku wareejiyey tikniko iyo agab ciidan oo cusub oo awood cusub ku kordhin doona howlgallada AMISOM oo ay ku jiraan kuwa ay ku fureeyso wadiiqooyinka ay dadwaynaha iyo saanaddu marto ee KG Somalia.
Wuxuu Ciidamada Itoobiya ee halkaa jooga uga mahad celiyey wax uu ku sheegay sida ay u dhaqan gelinayaan qorshaha qaran ee kala guurka.
Waxaa qorshahaa ka mid ah, in AMISOM ay si dhow ula shaqeeyso Ciidamada Amaanka Somalia oo si tartiib tartiib ah ula wareegaya mas’uuliyadda amaanka kahor inta aanay AMISOM dalka ka bixin.
Wuxuu sheegay inay iminka heleen gaadiid iyo qalab dheeraad ah oo kuwa guurguura ah oo ka caawin doona hufnaanta howlgalladoooda.
“Wuxuu agabkani naga caawinayaa inaan awood u yeelanno fulinya howlgallo weerar ah oo ka dhan ah cadowga,” ayuu yiri taliyuhu.
Waxaa la sheegay inuu socdo qorshe lagu fulinayo weerarro ballaaran oo dhinacyo badan ka imanaya oo lagu qaadayo kooxda Shabaabka.
Previous article”Orod iska dhici karoonaha kula degey!” – Shiinaha oo isagoo ku diganaya baddiisa xoog uga cayriyey markab dagaal oo uu Maraykanku leeyahay!
Next articleJilaa Muslim ahaa oo muhim u ahaa Bollywood oo faja’ u dhintay + Sawirro